कस्तो बनेको छ चलचित्र “शेरबहादुर” - समीक्षा ? | Hamro Patro
कस्तो बनेको छ चलचित्र “शेरबहादुर” - समीक्षा ?
मन्दिप गाैतम - Feb 03 2018
सुनिल थापा, मेनुका प्रधान, कर्म र रबिन्द्र झा अभिनित चलचित्र “शेर बहादुर” यो साता प्रदर्शन भएको छ । थ्रिलर जनरामा आर राजबंशीले निर्देशन गरेको यो चलचित्रले दर्शकलार्इ कति बाध्न सक्छ त ? जानौं यस चलचित्रको समीक्षामा ।
मेक्यानिक कर्म, भारतबाट गाडी चोरेर ल्याउने रबिन्द्र झा र डान्स बारमा काम गर्ने मेनुका प्रधान साथि हुन् । धरानका घरहरुमा छिरेर चोरि गर्ने काम समेत गर्छन् यी तिन मिलेर । एकदिन यसरि नै चोरी गर्ने क्रममा यी तिन भूपू सैनिक सुनिल थापाको घर पुग्छन् । कति सहज छ त्यो चोरी ? को हुन् शेरबहादुर ? यी सबै कुरा जान्न भने यँहाहरुले चलचित्र शेरबहादुर हेर्नपर्ने हुन्छ ।
कथा पटकथा संवाद
हलिउडको चलचित्र “डोन्ट ब्रिथ”बाट प्रेरित चलचित्रको कथालार्इ प्रमोद क्षेत्रीले लेखेका हुन् । उनको लेखाइमा खासै मेहेनत देखिदैन, उनले चलचित्रलार्इ नेपालीकरण समेत गर्न खोजेका छैनन् । आफ्नो संवादहरुमा पनि चुकेका छन् प्रमोद । चलचित्रको पहिलो हाफ खासै रोचक छैन, दोश्रो हाफले भने पक्का दर्शकलार्इ बाधेर राख्छ, चलचित्रमा त्यो बेलाको कुनै पल तपाइँहरुलाई आँखा झिम्काएर नि छुटाउन मन लाग्दैन । तर एउटा सशक्त क्लाइमेक्सले चलचित्रलार्इ अव्वल बनाउन सक्थ्यो , जुन हुनसकेको छैन । अन्त्यका दृश्यहरु अलि धेरै लम्बिएका छन् । प्रमोद क्षेत्रीको पटकथाको मुख्य कमजोरी त के हो भने उनको चलचित्रको पहिलो सिनले नै चलचित्रको अन्त्य अनुमानित बनाइदिन्छ ।
सुनिल थापा मेनुका प्रधान कर्म र रबिन्द्र झा, सबै सशक्त कालकारहरु चलचित्रमा समावेश गरिएको छ, तर कोहि कलाकारले पनि आफ्नो अव्वल प्रस्तुति दिन सकेका छैनन् । सायद निर्देशक आर राजबंशीले नै आफ्नो कलाकारबाट उत्कृष्ट प्रस्तुति निकाल्न सकेका छैनन् । सबैको काम मध्यम छ ।
प्राविधिक पक्ष र सङ्गीत
बिजु कर्माचार्यको साउण्ड डिजाइन र शैलेन्द्र प्रधानको ब्याकग्राउण्ड म्युजिकले शेरबहादुरलार्इ धेरै सम्हालेको छ । यी दुइको काम प्रशंशनिय छ । त्यसबाहेक दिर्घ गुरुङ र नारायण जिसीले पनि छायांकन राम्रो गरेका छन् । राजु पेन्टरको कला निर्देशनमा नेपालीपन महसुस हुदैन, उनको काममा अंग्रेजी चलचित्र हावी भएको छ । सङ्गीतको कुरा गर्नपर्दा कोशिष क्षेत्रीको कान्छी मट्यांग ट्यांग त्यति रुचाइदैन ।
आर राजबंशीको निर्देशन केहि खास छैन, उनले चलचित्रमा कुनै पृथकता दिन सकेका छैनन् । थ्रिल निकै कम फिल हुन्छ उनको चलचित्रमा र मुख्य कुरा आफ्नो उत्कृष्ट कलाकारहरुबाट उल्लेखनीय प्रस्तुति निकाल्न नसक्नु उनको अर्को कमजोरी हो । तर दोश्रो हाफको केहि क्षणले भने उनको यो चलचित्र एक पटक हेर्न सकिने चलचित्र बन्न पुग्दछ ।
आर राजबंशीको कमजोर निर्देशन, कलाकारको मध्यम अभिनय र प्रमोद क्षेत्रीको कमजोर लेखन शेर बहादुरका कमजोरीहरु हुन्, त्यस बाहेक साउण्ड र दोश्रो हाफ ठिक छन् । थ्रिलर रुचाउने दर्शकले शेर बहादुर एकपटक हेरेर मनोरञ्जन लिन सक्नेछन् ।
रेटिंग : २.५/५